Soo dejisan Yandex.Browser 16.10.0.1326 – Android – Vessoft
Soo dejisan Yandex.Browser
Yandex.Browser – browser a Soomi dhirta web fudud. Yandex.Browser dedejisaa load bogga lagu jiro xiriir u gaabiyaa internet oo badbaadiyay bandwidth ah. software ka kooban bar bookmarks u fududahay in goobaha caanka ah helaan. Yandex.Browser u saamaxaaya in ay waafajinta bookmarks la aaladaha kale ee isticmaalaya xisaab. software ayaa sidoo kale waxaa ka mid ah raadinta iyo talooyin cod marka raadinta. Yandex.Browser kuu ogolaanayaa inaad si loo doorto engine search a iyo goobaha gaarka loo dhigay.
Fast oo ku habboon ee dhirta web
loading si dhakhso ah pages
Comments on Yandex.Browser:
Yandex.Browser Software la xiriira:
Kadib Browser ayaa la daawado raaxo ah websites internet-ka. User waxay leedahay helaan in ay gaadmada ah ee kala duwan iyo modules si loo hubiyo in shaqada tayada browser ah.
English, Français, Español, 中文... Google Chrome 54.0.2840.85
Kadib Browser Fast iyo ammaan ah oo taageero ka helaya teknoolajiyada casriga ah. Software ka kooban yahay hab qarsoodi ah si looga hortago in naftu taariikhda websites arkaan.
العربية, English, Українська, Français... Opera 37.0.2192.105088
العربية, English, Українська, Français... Puffin Web Browser Free 4.8.0.2965
Kadib Mid ka mid ah madaxda adduunka ee ka daalacashada ugu fiican oo taageero of technology casriga ah. Software waxay bixisaa joogo raaxo leh internet-ka iyo taageerada xidhiidhka ka mid daro kala duwan.
العربية, English, Français, Español... Telegram Desktop 3.14
Chat Tababaraha isgaarsiinta oo lacag la'aan ah kaas oo loogu talagalay by sameeysa ee shabakada bulshada VKontakte. Software wuxuu taageeraa nidaamka lagu kalsoonaan karo sirta ah ee fariimaha ammaan ah.
العربية, English, Español, Deutsch... Mindomo 3.0.15
العربية, English, Français, Español... The Simpsons: Tapped Out 4.14.0
English, Français, Español, Deutsch... Link2SD 4.0.12
Files software The si ay u maareeyaan faylasha iyo codsiyada lagu wareejiyo ku saabsan kaadhka xusuusta. software ka kooban qalab si toos ah loo soo dajiyo codsiyada ay u card SD ah.
العربية, English, Українська, Français... Hotspot Shield 4.7.4
Internet Programka sirta Tool si loo hubiyo in sir ah ee internet-ka. Software The kuu ogolaanayaa inaad si ay u qariyaan IP-address ee user iyo in ay helaan goobo hor istaagay.
العربية, English, Français, Español... Teamviewer 12.0.6033
Helitaanka Remote software ah ee ay gacanta ku fog of computer by isticmaalaya multi-taabto gaar ah si loo maamulo iyo wareejiyo faylasha ee labada dhinacba.